Visa gaa Middle East Archives | Na-arụ ọrụ na UAE, Qatar ma ọ bụ Kuwait
Visa gaa Middle East
Visa na Middle East
Visa na Middle East ya na ụlọ ọrụ obodo Dubai. Yabụ na ị na -ekwu okwu n'ozuzu ị nwere ike ịnwe nhọrọ iji kpọbata gị n'otu n'ime mba ndị kachasị mma na mpaghara ndị kachasị ewu ewu na Middle East. Companylọ ọrụ anyị na - enyere ndị ọrụ si mba ọzọ aka inweta ọrụ na Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirate Lebanon na ọbụna Palestine. Yabụ na -ekwu okwu n'oche ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnweta visa na otu n'ime obodo ndị ama ama na otu n'ime ebe kachasị mma maka ọrụ wee hapụ ezinụlọ gị na echiche gị. Dubai ga-enwe nhọrọ ahụ na Dubai iji nweta ohere ọrụ.
Ọrụ na Middle East! Ghagharia taa!
Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ mba ọzọ, ị na-achọ ijide ezigbo ohere ọrụ na Middle East. Companylọ ọrụ obodo Dubai na-enyere ndị si Pakistan Saudi Arabia aka. Ọzọkwa, Dubai na mba ndị ọzọ dị ka Kuwait na Lebanon. Anyi na enyere ndi mmadu nile aka inweta ma jidekwa oru ndi kwesiri ekwesi na oru ndi ozo. Yabụ, anyị bịara ebe a iji nyere gị aka ruo ókè anyị nwere ike ịbụ onye ọrụ na-aga nke ọma site na ịnye gị ohere Visa na mba ị họọrọ. Would ga - enwe nhọrọ ịhọrọ site na mba ndị toro dị elu nke na-ewe ndị ọrụ ego ụgwọ.
Anyị nwere olile anya ịhụ gị na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Nke a bụkwa obodo anyị bụ isi obodo ebe anyị nwere ike itinye gị ma nye gị Visa.
Ihe ị ga - eme bụ naanị ịtụ Visa. Tinyezie visa gi na ụgbọ ibu. Mgbe ahụ kwụọ ụgwọ. Wee fechaa ebe ichoro. Ihe a niile aburula onye oru gha acho.
Na-egosi 1-12 nke 15 results
Ndabere sortingHọchaa site na ewu ewuHọchaa site na nkezi fimChọpụta site na nke kachasị ọhụrụHọchaa site na price: ala eluHọchaa site na price: elu ala
Visa na Bahrain
Visa na ụlọ ọrụ Dubai City. Bahrain bụ agwaetiti dị na Ọwara Persia. Anyị na ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike ịrụ ọrụ ebe a site na sistemụ mbugharị ụgbọ elu anyị site na ụlọ ọrụ Dubai City. Bahrain bụ akụkụ nke Middle East !. Anyị na-enyere ndị expats aka ugbu a ịkwaga Bahrain.
Gini mere anyi ji hu Manama, isi obodo Bahrain na I ghapu? Na Bahrain, enwere ọtụtụ ihe ime. Nwere ike ịkwaga maka ndụ ọhụrụ, ohere ọrụ ka mma !. Nke a bụ obodo ị ga - achọta ohere ọrụ dị mma ma na - adọrọ mmasị.
Visa na Saịprọs
Visa na ụlọ ọrụ Dubai City. Site na ọrụ a, ị ga - enweta ọrụ na Saịprọs. Ndị otu ndị ọkachamara anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịkwaga mba ọzọ. Will ga-enwe ohere iji rụọ ọrụ na Saịprọs. Nweta ohere gi ịrụ ọrụ na paradaịs. Ma bido n’usoro visa anyị maka njem gaa Saịprọs.
Visa gaa Ijipt
Isalọ ọrụ Dubai City na Visa gaa Egypt. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka inweta ọrụ na Cairo na Alexandria obodo ndị a na-echere expats. Gbalịa hụ na ị ga-ahọrọ obodo zuru oke ma ọ bụ Obodo maka gị. Ndị otu anyị ga - enyere gị aka inweta ọrụ na mpaghara ahọpụtara.
Were ụlọ ọrụ obodo Dubai gaa visa. Anyị bịara ebe a iji nyere gị aka ịbụ onye ọrụ na-aga nke ọma. Yabụ na -ekwu okwu n'ozuzu ya ga-enwe ike ịnweta visa na Iran.
Yabụ na ịnọ na ya bụ obodo akọwapụtara maka ndị mba ọzọ. Ga-amara iwu dị na ya, ị ghaghi ịma ihe na-eme ọfụma na ihe kpatara iji nweta ihe ọ ga - eme. Nke a bụ iwu siri ike nke ị ga - agbaso. Youkwesiri ijide n'aka na ị ga-agbaso iwu.
Visa na Iraq
Visa gaa Iraq, nweta ọrụ Visa ma bido ohere na-atọ ụtọ na mba Alakụba a. Nwere ike nwee Visa ma soro ụlọ ọrụ Dubai City rụ ọrụ.
Visa ga Jọdan
Visa ga Jọdan, ọ bụrụ na ị na-achọ ọmarịcha ebe ị ga-ebi, ị kwesịrị ịtụle ebe a. Firmlọ ọrụ anyị ga - enyere gị aka inweta ọrụ na usoro Visa na Jọdan. Obodo kachasị mma dịka Amman na Zarqa na-eche ndị ọbịa ga-esite na ụwa niile.
Visa na Kuwait
Isalọ ọrụ Dubai City na Visa na Kuwait. Ee, ị ga - esi na ebe nrụọrụ njem Dubai wee nweta ebe visa. Got nwere Middle East !. Anyị na-enyere ndị expats aka ugbu a ịkwaga Kuwait.
Kedu ihe kpatara anyị jiri hụ ndị Kuwait n'anya na ị kwesịrị ịhapụkwa? Na Kuwait, ị nwere ike ibugharị onwe gị ndụ ọhụrụ !. Yabụ, ọ bụrụ n’ị na-achọ ọrụ akwụ ụgwọ dị elu obodo a bụ maka gị.
Visa na Lebanọn
Visa na Lebanon yana ụlọ ọrụ obodo Dubai ọ bụ nhọrọ mmesi anya maka ndụ ọdịnihu dị mma. Ebe mara mma nke ukwuu iji malite ohere ọrụ gị ọhụụ. Biko lee anya n'okpuru ihe mere ị ga-eji were nweta Visa Lebanon ya na ụlọ ọrụ anyị.
Visa nye Oman
Visa na Oman ya na ụlọ ọrụ Dubai City. Yabụ, obodo nke Oman na-enye ahụmịhe dị iche iche maka ndị ọrụ si mba ọzọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, site na isi Muscat na-arụsi ọrụ ike ruo na mpaghara Salalah dị n'ụsọ oké osimiri ị nwere ike ịnwe ọrụ akwụ ụgwọ dị mma. Lockwaga na Oman abụghị naanị obodo Seeb na-egbu azụ.
Visa na Palestine
Visa na ụlọ ọrụ obodo Dubai bụ Visa na Palestine ọ bụ ezigbo ihe dị mma maka ndị na-achọ ọrụ mba ụwa. N’ezie, nzukọ anyị na-enyere ndị si ebe niile aka. Yabụ ọ bụrụ na ị ga-enye iwu maka ọrụ ndị a n'ezie ị ga-aga Palestine n'ime ọnwa 3 site na mgbe enyere n'iwu maka ọrụ ya.